Fakana an-keriny sa hala-jaza? :: Roa lahy maty novonoin’ny fokonolona • AoRaha
Fakana an-keriny sa hala-jaza? Roa lahy maty novonoin’ny fokonolona
Tsy namelan’ny fokonolona tao Ambohitsaratelo sy Ambolotsararano raha tsy tapitra ny ain’ireto roalahy voalaza ho olon-dratsy, rehefa avy nahafaty ny raim-pianakaviana iray, isan’ireo andian’olona nanenjika azy ireo. Fokonolona miisa dimy izay nifanandrina tamin’ireto olon-dratsy ireto ihany koa no naratra vokatry ny tsindron’antsy.
Naharitra ora roa ny fifandonana tamin’ireo jiolahy miisa telo sy ny fokonolona tao Ambohitsaratelo sy Ambolotsararano, fokontany roa mifanila ao anatin’ny kaominina ambanivohitra Ambano sy Andranomanelatra, distrikan’Antsirabe II, tamin’ny alakamisy lasa teo nanomboka tamin’ny 3 ora tolakandro. Fikasana haka ny zaza tao am-baben’ny raim-pianakaviana iray no niandohan’ny savorovoro, raha ny voalazan’ny loharanom-baovao.
« Telo lahy izy ireo, ka ny iray nitondra basy raha samy nitondra sy niravaka antsy maro be avokoa ireo roa lahy ambiny », hoy ny fitantaran’i Pascal Rakotomalala, Ben’ny tanànan’Ambano. Teny an-dalana hody ny raim-pianakaviana nibaby zaza sy ny vady aman-janany no avy hatrany dia nosakanan’izy telo lahy sady nobedainy. Nifandrimbona namaha ny lamba namatotra ilay zaza ny roa lahy. Avy hatrany dia namely tamin’ny sabatra ny iray.
Nahavita niantso vonjy ilay renim-pianakaviana sy ny mpiandry omby iray nahatsikaritra ity tranga ity ka avy hatrany dia vory lanonana ny mponina teny amin’ny manodidina.
Nanomboka teo amin’io toerana ao amin’ny fokontanin’Ambohitsaratelo , kaominina Ambano io ny fifanenjehana. Nitohy hatrany Ambolotsararano, kaominina Andranomanelatra izay nahatrarana ireo roa lahy niravaka antsy. Tafatsoaka kosa ilay iray nitondra basy. Tsy nanaiky mora anefa izy roa lahy ka nanindrona antsy ireo nitazona azy ka io nitarika ny fahafatesan’ny olona iray sy ny faharatran’ olona dimy io.
Tezitra ireo fokonolona. Nohodidinin’izy ireo no sady nasiany tora-bato izay naharitra ora roa mahery izy roa lahy. “Noho ny ody maherin’izy ireo anefa dia tsy nampihontsona azy ireo ny tora-bato fa nofafainy tamin’ny tanana dia afaka ny ratra. Vao mainka niakatra indray ny hatezeran’ny fokonolona ka niafara tamin’ny fitadiavana hevitra hanotana ny odiny sy ny fanaperana ny ainy ny raharaha”, hoy ny fitantaran’ireo olona nanatrika ity tranga ity.
Nalevin’izy ireo any an-toerana ihany ny fatin’ireo roa lahy, ny zoma lasa teo, saingy malaza be any an-toerana amin’izao fotoana ny maha avy amin’ny fikambanana “zaza mainty” azy telo lahy voalaza ho olon-dratsy mpangala-jaza na mpaka an-keriny ireto, ka manahy mafy ny amin’ny mety ho valifaty ataon’ny namany ny mponina. Andanin’izany anefa ireo mihevitra ity tranga ity ho lonilony satria raha ny fantatra dia vao roa herinandro lasa teo izay no nisy nikasa hanafika fa tsy nahavanona io fianakaviana voasakan-dalana niandohan’ny raharaha io.
Ady amin’y zava-mahadomelina :: Nahasarona rongony 150 000 fototra sy arivo kilao mahery ny zandary
Fanafihana fiara mpitatitra olona :: Lasan’ny jiolahy ny vola iray tapitrisa ariary mahery